महिला सशक्तिकरण : समस्या र समाधान
सम्पत्तिको हकमा पनि महिलाको सहभागीता पुरुषको तुलनामा नगण्य नै छ ।आर्थिक सामाजिक अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागीता कुरै नगरौ । यसरी विभिन्न कुराहरूमा पछाड़ी रहदा रहदै पनि साक्षरता प्रतिस्पर्धाको तुलनामामा महिलालाई कम अबसर दिईन्छ।
नेपाल महिला राष्ट्रपति भएकै देशमा महिला किन सधैं पछि किनभने यो नेपाल हो यहाँ नराम्रो काम गर्ने लाई तालि बजाईन्छ भने राम्रो काम गर्ने गालि गरिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति,सभामुख बिभिन्न निकायहरूमा महिलाको नेतृत्व देखिएको छ तर नेतृत्व देखिएता पनि महिला शशक्तिकरण भने हुन सकेको छैन। दिन रातै हत्याहिंसा ,बलात्कार बढी रहेको छ । निर्मला जस्ता कयौं बलत्कृत निर्मलाहरुने न्याय पाएका छैनन।
भनिन्छ नि महिला पुरुष एउटै रथका दुई प्राङग्रा हुन । जसको कारण यि दुई बिना शृष्टिको संरचना हुन सक्दैन। महिला पछि पर्नुमा सबभन्दा बढी हात हाम्रै समाजको रहेको छ । ज्यालामा काममा लगाउदा पनि महिलालाई भन्दा पुरुष लाई ५०% बढी ज्याला दिईन्छ श्रम दुबैले एकै गर्नु पर्ने अनि महिलाई किन शोषण ? संख्याको आधार नेपालमा महिला नै बढी छन । पुरुषको तुलनामा अनि हक अधिकारमा किन पछि ? कारण महिला कमजोर भएर बस्नु ,कहिँ सभा गोष्ठी समारोहमा पनि घरका पुरुषका डरले उपस्तिथि नहुनु हो ।
आधा धर्ति नारीले ढाकेको छ। आगामी दिनहरुमा महिला हिंसा बलात्कार अर्थात महिला माथि हुने अन्य भेदभाव हटाउने हो भने अब आउने चुनावमा महिलाई राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री बनाउन सिमित सिट दिएर किन नचुनिने ? महिला सशक्तिकरणको नाममा देश-विदेशबाट जती नै साक्षात्कार गरे पनि हाम्रो जस्तों पुरुष प्रधान देशमा महिला अधिकार कागजको पानामा लेखिए पनि ब्यवहारमा देखिने कहिले हो ?
भोलि शुक्रबार चन्द्र ग्रहण लाग्दै, यी ४ राशिलाई शुभ
श्रीलंकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले भने – ‘नेपाल हाम्रो मुटुमा रहन्छ’